नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भिमबहादुर दाहाल ‘इन्भेष्टिगेटिभ अफिसर’ को रुपमा संगठनमा परिचित प्रहरी हुन् । जागिरे जिवनको आधा बढी समय अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा बिताएका दाहाल धेरै पटक उत्कृष्ट प्रहरी समेत घोषित भए ।
केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) को जघन्य अपराध शाखामा समेत उत्कृष्ट काम गरेका अफिसर उनि तत्कालिन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा बिराटनगर रहदा ‘रिजनल इन्भेष्टिगेशन टिम’ रिटको पहिलो ‘कमाण्डीङ अफिसर’ समेत हुन् ।
बिगतभन्दा निकै सुधार उन्मुख छ । हामीले तथ्याङको हिसाबले हेर्ने हो भने अघिल्लो आर्थिक बर्षमा ३७४ जनाको सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको थियो । त्यो भनेको १.२ मृत्यु दर हो । यो तथ्याङ पनि अघिल्लो आर्थिक बर्ष भन्दा कमनै हो ।
यो नयाँ आर्थिक बर्षको शुरुवाती महिनाको आजसम्मको तथ्याङले ५० प्रतिशत भन्दा बढी सडक दुर्घटना घटेको देखाउछ । अहिले ०.५ मात्रै मृत्यु दर छ । बिगतका दिनमा दैनिक १ देखि २ जनासम्मको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुन्थ्यो भने अहिले मासिक १६ जनाको मृत्यु भएको हाम्रो तथ्याङले देखाउछ ।
सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु दर घट्नुको कारण ट्राफिक प्रहरीको सकृयतानै हो । हामीले मादक पर्दाथ सेवन गरी सबारी चलाउने चालकहरुलाई पहिलो प्राथमिक्ताको आधारमा कारबाही गरिरहेका छौ । किन भने सबै भन्दा बढी दुर्घटना मापसे सेवनकै कारण देखिएको छ । अहिले मापसे गरी सबारी चलाउनेलाई कारबाही गर्ने क्रम ३ सय प्रतिशतले बढेको छ।
दोस्रो कारण भनेको मानविय लापरबाही । लापरवाहीले ४३ प्रतिशत सडक दुर्घटनाको कारण ओगट्ने गरेको छ ।
यसको रिजल्ट भनेको सबारी साधनको तिब गतिमा नियन्त्रण आएको छ । हामीले अहिले दुर्घटना बढी हुने र तिब्र गतिमा चल्ने सडक एरियामा बढी फोकस भएर टिम परिचालन गरेका छौ ।
उदाहरणमा भन्नु पर्दा बाईक चलाउदा हेल्मेट अनिवार्य छ । हेल्मेट लगाइन्छ तर ‘क्लिप’ लगाइदैन । क्लिप नलगाएपछि हेल्मेट लगाएको के अर्थ भो ? ट्राफिकले क्लिप लगाइ दे भन्दा क्लिव कहाँ लाग्छ भन्दा त चिउडो भन्दा तल झुण्डि रहेको हुन्छ !
सबारी दुर्घटना न्यूनिकरणको जिम्मेबारी पनि हामी सबैको हो । जति हामी सजक हुन्छौ जति संम्वेदनशिल हुन्छौ त्यति धेरै क्षति कम हुने हो । त्यस कारण सबारी चलाउदा ‘नो ओभर स्पिड, नो मापसे, नो लापरबाही’ ।